Horumar waara ee Iceland | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Iceland iyo tamar nadiif ah
Jose Manuel Vargas sawir-haye | | Tamarta
Iceland waxay sharaf u leedahay inay ahaato dhaqaalaha ugu horeeya dunida ee tamarta nadiifka ah. Madaxweynaheeda, Ólafur Ragnar Grímsson, waa difaac adag oo ku aaddan horumarka waara meel kasta oo uu tago. Labadii sano ee ugu dambeysay wuxuu horey u siiyay shirar badan oo uu ku hormarinayo mashruuca dalkiisu ku fulinayo tamarta noocan ah.
Waxay si uun isugu dayaysa inay ka dhaadhiciso adduunka in u wareejinta tamarta kale aysan qaali ahayn sida loo malaynayo. Qarniyo badan Iceland waxay ka mid ahayd dalalka ugu saboolsan Yurub. Umad u heellan beeraha iyo kalluumaysiga oo korontodiisu ka timi 85% dhuxul dibedda laga keeno. Waqtigaan la joogo, ku dhowaad 100% koranteeda waxaa laga soo saaraa ilo dib loo cusboonaysiin karo, gaar ahaan tamarta laga dhaliyo dhulka, taas oo macnaheedu yahay horumar dhaqaale oo aad u ballaaran oo uu dalka ku talaabsaday
Madaxweynaha Iceland wuxuu ku adkeysanayaa in horumarka waara uu yahay ganacsi faa'iido leh. Wuxuu xaqiijinayaa in arrimuhu ay ka duwanaan lahaayeen haddii dunidu ogaato in isbeddelka tamarta uu yahay ganacsi bixin doona macaash badan. Icelanders hadda waxay ku raaxaystaan ​​korantadooda iyo adeegyadooda kululaynta oo aad uga jaban.
Waxba kuma lahan xaaladdii Iceland ay haysatay shan sano ka hor, markii bangigeedu burburay. Qaabkan dhaqaale ee cusub, waddanku wuxuu baray waddamada kale ee Yurub cashar qiimo leh oo ku saabsan sida looga badbaado xaaladda adag ee sidan oo kale ah. Thanks to maalgashiga tamarta nadiifka ah ee bilaabatay dhowr iyo toban sano ka hor, maanta Iceland waxay leedahay kobcitaan dhaqaale sanadle ah oo ah 3% iyo heerka shaqo la'aanta oo kayar 5%. Qiimaha tamarta ayaa si weyn hoos ugu dhacay, taas oo kordhisay heerka dhaqaale ee qoysaska.
Isbeddelkan ku yimid warshadaha tamarta ayaa sidoo kale soo jiitay maalgashadayaal shisheeye. Qaar ka mid ah dareerayaasha ugu waaweyn ee aluminium iyo xarumaha kaydinta macluumaadka waxay ku yaalliin Iceland, iyada oo ay ugu wacan tahay qiimaha hooseeya ee tamartooda. Dhawaan suurtagalnimada ayaa xitaa soo baxday in koronto laga dhoofiyo Iceland loona soo dhoofiyo Boqortooyada Midowday iyada oo la adeegsanayo fiilo hoosta badda. Wadamada kale ee Scandinavian-ka ayaa sidoo kale ka shaqeynaya sameynta shabakad fiilooyin badda hoosteeda mara oo laga dhoofiyo tamarta Iceland.
Laakiin Iceland kaliya maahan tusaale xagga horumarka waara, waxay kaloo bixisaa mid ka mid ah moodooyinka waxbarasho ee ugu horumarsan Yurub iyo adduunka. Tan oo dhanna waxay ku mahadsan tahay horumarka ka jira aaggan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Badbaadinta » Tamarta » Iceland iyo tamar nadiif ah
Iceland waa dal ay ku nool yihiin 323.000 dad ah oo leh kheyraad fara badan oo ku jira tamarta dhulka. Tani waa mid aad u fudud. Looma adeegsan karo tusaale dalalka ay ku nool yihiin tobanaan milyan oo qof oo ay ku yar yihiin ilaha tamarta.
Waxaan iibiyaa dhammaan saamiyadayda 'Endesa'
Dhibaatooyinka dhaqaale ee Faransiiska iyo François Hollande